zin wai, Author at Intern Plus
Author: zin wai
Work From Home လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်း‌တွေနဲ့ ပိုပြီးရင်းနှီးမှု ရလာစေဖို့...
Employer, HR Article
လေ့လာ‌တွေ့ရှိ‌ချက်တွေအရ ဝန်ထမ်း ၅၆% လောက်က အရင်လိုရုံးတက်ပြီး အလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့ကို မျော်လင့်နေကြပါတယ်။ အဖြေရှာကြည့်တဲ့အခါမှာ office မှာအလုပ်လုပ်ရတာက WFH လုပ်ရတာထက်...
5 tough questions the managers want to...
အောက်ပါအချက် (၅) ချက်က manager ​တွေကိုယ်တိုင်နားလည်သ​ဘော​ပေါက်ခြင်းမရှိ​ပေမယ့်ထုတ်​မေးဖို့မသင့်​တော်တာ၊ ​မ​မေးရဲတာ၊ ​မေးဖို့ကသိက​အောက်ဖစ်တဲ့အချက်(၅)ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့​သော်လည်းသိသင့်ထားတဲ့အချက်​တွေလည်းဖြစ်တာ​ကြောင့် တစ်ခါတည်းစုစည်း​ရှင်းပြထားပါတယ်။ 1. "လူ​​တွေကသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်သူလုပ်​နေတာ​လေးကိုဘာလို့ထပ်ပြီးချီးကျူး/ချီး​မြှောက်ရတာလဲ?" အ​ဖြေက​တော့ရှင်းပါတယ်...
သင့် Employer Branding အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ?
ပညာရှင်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေအရ ၂၀၂၁ ရဲ့ ပထမ ၄လတာမှာတင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်တည့်မတ်လာနိုင်ဖွယ်ရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကပ်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေထဲက...
Candidates, Job Tips
နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ်ဖြစ်နေဖို့.. 2020 ကုန်တော့မယ်ဆိုတော့ 2021 နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား ? တစ်နှစ်တာ ကိုယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
အလုပ်ခွင်မှာ Effective Communication ဖြစ်​အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
အလုပ်ခွင်မှာ Effective Communication ဖြစ်​အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? Intern Pluser တို့ရေ ဒီ​နေ့မှာ​တော့ Effective Communication နဲ့ဆိုင်တဲ့အ​ကြောင်းအရာ​တွေကို...
Interview မှာကိုယ့်ကိုကိုမိတ်ဆက်ပါလို့ပြောရင် ဘယ်အချက်တွေ ပါအောင် ဖြေရမလဲ?
Interview မှာကိုယ့်ကိုကိုမိတ်ဆက်ပါလို့ပြောရင် ဘယ်အချက်တွေ ပါအောင် ဖြေရမလဲ? Intern Pluser တို့ရေ ဒီနေ့မှာတော့ interview တိုင်း‌မှာ မေးလေ့ရှိတဲ့...
21st Century မှာအလုပ်အတွက်ပြင်ဆင်​ပေးမယ့် Skills
Candidates, Career Advice, Job Tips
21st Century မှာအလုပ်အတွက်ပြင်ဆင်​ပေးမယ့် Skills ခေတ်​တွေ​ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုထဲဝင်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေများလာပါပြီ။ အရင်ကလို ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုထဲက ကိုယ့်ကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ နေရာတစ်ခုရယူနိုင်ဖို့...
Positivity is the best policy လူတွေဟာ ကိစ္စတစ်ခုခု၊ အခက်အခဲတစ်ခုခုကို တွေ့ကြုံရပြီဆိုရင် သူတို့ရဲ့အမြင်တွေ၊ ခံယူချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ဖြေရှင်းပုံကွဲပြားလေ့ရှိပါတယ်။...
2020 ခုနှစ်အတွင်း InternPlus တွင် စိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့သော Content (10)...
Intern Plus Myanmar ရဲ့ content တွေထဲကနေပြီးတော့ 2020 မှာ ကျောင်းသားတွေ အဖတ်အများဆုံးနဲ့ စိတ်ဝင်စားအများဆုံး Content...
HR Story for December
Employer, HR Story
Intern Plus Myanmar ရဲ့ HR Story လေးကတော့ HR တွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊...